7 Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 7 Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu
(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 11/04/2021)
Ukuya eYurophu kubuyela umva ngexesha kumhlaba obanziweyo wamabhotwe, amahlathi, kunye neyona ndawo intle kunye neendawo ezinamanzi. Nokuba uhamba e-Itali okanye eSwitzerland, ukucwangcisa a 2 uhambo 'lweenyanga, okanye ube neveki kwilizwe elinye laseYurophu, kufuneka wenze ixesha lokuphonononga 1 kweendawo ezintle ezinamanzi eYurophu, zidweliswe kwi yethu 7 ezona ndawo zinamanzi amahle eYurophu.
Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, Engambi Train Amatikiti Website In The World.
1. Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu: Iimpompo zamanzi eMarmore, ElamaTaliyane
Ukufika kwamanzi eMarmore kufikelela 165 m ngeyona inde ngaphandle kwe 3 ekuphakameni kwe 85 m. ngoko ke, Owona manzi mde maninzi enziwe ngabantu eYurophu ngumjelo wamanzi iMarmore. Le ngxangxasi iphefumlayo ifumaneka entliziyweni yengingqi ye-Umbria kwaye yenziwa ngamaRoma amandulo.
Amatye anemibala emhlophe kunye neengxangxasi ezinamacala amaninzi afikeleleka ngokulula ngololiwe ukusuka eRoma Termini ukuya edolophini iTerni. Izitimela eziya eTerni zihlala rhoqo kwaye uloliwe uhamba rhoqo ngeyure nganye. Xa ufika kwisikhululo sikaloliwe saseTerni, kukho iibhasi ezinokuthatha kukusa amanzi. Kukho intlawulo yokungena kwiingxangxasi.
kunjalo, ngeTrenitalia itikiti likaloliwe ufumana isaphulelo kwaye yenye enye inzuzo yokuhamba ngololiwe ukuya eMarmore kwiingxangxasi:)
Ingcebiso yangaphakathi encinci evela kuthi kuwe, nazi indawo zokutyela ezinhle ezinyaweni zeMarmore, kodwa sincoma kakhulu ukubamba i-panini ukuya e-Da Panzerotto. Ukuba ne nepikniki kwindawo ethe cwaka Ngokuma kwamanzi angcono kakhulu kunamava okhenketho.
IRoma ukuya kwitikiti zeTerni
UFlorence ukuya eRoma amatikiti
Amatikiti ePisa aya eRoma
Iitapile ziya kwitikiti laseRoma
2. Iingxangxasi zeManzi yeGeorge, ElamaTaliyane
Eyona ndawo inamanzi eyaziwayo neyayifotayo apha e-Italy yindawo enamanzi amdaka kwilali yaseDi Saturnia. Ifumaneka eTuscany, Imithombo eshushu yeSaturnia yenye yezona zintle imithombo eshushu yendalo eYurophu. Le dolophu incinci ilikhaya kwimithombo eshushu edumileyo ukususela kumaxesha aseRoma. Iholide yakho ye-Tuscany ayizukugqitywa ngaphandle kwemini kwiifula zamanzi ezishushu zeSaturnia. Imithombo ilungile xa iphumla emva kokundwendwela amanye amaqula amahle akufutshane, Isigidi, kunye nokuwa kweGorello.
Iingcambu zamanzi zeSaturnia ezimangalisayo zezi train ride kude neRoma. Ekuqaleni, uthatha uloliwe ukuya ku-Orbetello-Monte Arg. kwaye ukusuka apho unokufikelela kwiindawo ezintle ezinamanzi ngemoto okanye iteksi, zonke ezingaphantsi kwe 3 iiyure ukusuka eRoma.
IRoma ukuya e-Orbetello Monte amathikithi eArgentina
Sestri Levante eRoma Uqeqesha
Parma ku Florence Uqeqesha
3. Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu: IRhini Waterfalls, Swizalend
Ukudlula kwiNqaba eXabisekileyo kunye nebhotwe leSchloss Laufen, Iifowuni zamanzi eRhini yenye yezona ndawo zinkulu zamanzi eYurophu. Ekuqalekeni, Iindawo ezinamanzi eRhini zibonakala zimfutshane kakhulu, kodwa zibanzi kakhulu. Uya kukwazi ukufumana ezi ndawo zinamanzi amnandi kuzo zonke uzuko lwazo ukusuka ku ukukhwela isikhephe emlanjeni.
Kungcono ukutyelela iindawo ezinamanzi aseRhine ehlotyeni emva kokunyibilika komkhenkce kwaye yonke into ejikeleze iluhlaza eluhlaza. Iintlambo zamanzi zaseRhine zezi 50 ukukhwela uloliwe kude neZurich kwaye kukho izitishi zoololiwe ezibini kumacala omabini eengxangxasi. ngoko ke, Kulula kakhulu ukuya kwiindawo ezinamanzi amangalisayo zombini kwiintsapho kunye abahamba solo.
I-Munich ukuya kwitikiti laseZurich
I-Berlin ukuya eTikiti laseZurich
I-Basel eya eZurich iitikiti zoLoliwe
I-Vienna ukuya eTikiti seZurich
4. I-Staubbach Falls, Swizalend
Ingqonge ilali entle yealpine, Ukuwa kwamanzi eStaubbach kwithafa laseLauterbrunnen eSwitzerland kuyinto entle. Indawo entle ejikeleze lo manzi mde ifana nokupeyinta ithandekayo. Zikhona ngokwenene 72 iingcambu zamanzi kwiLauterbrunnen Valley, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, I-Staubbach waterfall yeyona ndawo inomdla kwaye inothando kubo bonke. Ngexesha lentwasahlobo, intlambo iza ebomini ngemibala emihle kwaye amaqondo obushushu athambileyo avumela ukukhwela kunye nokuhlola indawo.
Abanye bathi le ntili yaseSwitzerland iphefumlele inqaku likaRivendell kaJR.R. Tolkein, osenokuba uhlala kwilali encinci kwaye uncoma izimvo zempompo yamanzi avela kwi-cafe ezinyaweni zayo.
I-Staubbach waterfalls ikufuphi nesixeko iBern kwaye ungafikelela kwithafa laseLauterbrunnen 3 iiyure ngohambo ngololiwe ukusuka eLucerne okanye ngaphantsi 4 iiyure ukusuka eGeneva. Ukusuka kwisikhululo sikaloliwe, Iindlela zamanzi kukuhamba hamba kwaye kufuneka uwele nje embindini wedolophu.
Lucerne ukuya eLauterbrunnen amatikiti
Ukuhlaziya amatikiti e-Lauterbrunnen
I-Lucerne ukuya kwitikiti elidibeneyo
I-Zurich ukuya kwitikiti eziDibeneyo
5. Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu: Ukukhuphela, Tyrol, Ostriya
Ukuba uthanda ukugqithisa kwaye ujonge ngakumbi imbonakalo emihle, uya kusithanda ngokupheleleyo isiqu samanzi saseStuibenfall eTirol. Iibhulorho ezinqumlayo kunye neenqaba ezityhutyhayo zenza ukuhamba kule ndawo inamanzi emnandi kwaye iyonwabisa. Umgama omde kunye nowona mkhulu wamanzi yi-2.4km, ukuze uyihlolisise uhambo lokujikeleza usuku lonke. the bentaba trail iqala ize igqibe kwindawo yokupaka iimoto kwidolophu yase-Umhausen.
Ngokuqinisekileyo uza kudibana nabakhweli abaninzi abakhenkethi apha endleleni, ke sukukhathazeka malunga nokuziva unesithukuthezi okanye ukulahleka.
I-Munich kuphela 3 iiyure kude nololiwe ukusuka eStuibenfall. ke, oku kuthetha ukuba ungabaleka ngokulula impelaveki ukusuka kwisixeko esixakekileyo usiya kwenye yezona ndawo zintle zamanzi eYurophu. ke, Uyonwabele imimandla esemaphandleni kunye neMunich kwiholide yakho yasentwasahlobo eYurophu.
Amatikiti eSalzburg ukuya eVienna
I-Munich ukuya e-Vienna amatikiti
Amatikiti eGrey ukuya eVienna
Prague ukuya eVienna amatikiti
6. I-Krimml Falls, Ostriya
Ifumaneka kwi-Austria's Ipaki yesizwe enkulu, Ipaki yeSizwe yeTauern ephezulu, Umjelo wamanzi weKrimml ngumbhobho wamanzi amathathu, kuzalisa 1490 m kububanzi kwaye 380 m phezulu. Amahlathi akudala, izilwanyana, ixhama elibomvu, kwaye iinkozi zegolide zezimbalwa zabemi bepaki ezinokuthi ziwele nawe xa usiya kwenye ingxangxasi emangalisayo eYurophu.. Ukuba a Umthandi wekampu kunye nomntu onamava wentaba, Le paki kunye neendlwana zamanzi zeKrimml ziya kuba yinto engalibalekiyo kwiindawo eziphezulu zaseOstriya.
Indawo entle ejikeleze imijelo yamanzi iphawuleka kakhulu entwasahlobo emva kokuba ikhephu liyanyibilika xa amanzi e-Krimml ethelela., Iintaka zicula kunye namabala amnandi avusa emva kobusika obude.
Unokuqhuba okanye ukuthatha uloliwe & ibhasi eya eKrimml. Uhambo lungaphantsi ko 3 iiyure ukusuka kwi-Salzburg kwaye akukho xesha uya kuba uhamba ngeparadesi yase-Austria.
UMunich ukuya kwitikiti lase Innsbruck
Iitikiti zeSalzburg ukuya kwi-Innsbruck
I-Oberstdorf ukuya kwitikiti lase Innsbruck
Amatikiti e-Graz ukuya e-Innsbruck
7. Ii-Waterfalls ze-Gavarnie, Fransi
Ihleli kwintlambo eluhlaza eluhlaza, iingxangxasi eziphakamileyo zeGavarnie eFrance 422 iimitha eziphakamileyo kwaye zithandwa kakhulu phakathi kwabakhenkethi. Ngokujonga iiPyrenees, Impophoma ye-Gavarnie iyathandana kwaye igqibelele kubakhweli abanzulu abanqwenela ukuphanda kwaye boyise i IiFrench Pyrenees. Ukuwa kwamanzi eGavarnie kuphela 40 Ukuhamba imizuzu ukusuka kwilali yaseGavarnie.
Iindawo ezintle ezinamanzi zisemdeni phakathi kweFrance neSpain kwiiPyrenees ezimangalisayo kwaye kuphela 4 iiyure kude neToulouse ngololiwe.
IYurophu yindawo yokuphupha kubahambi bodwa kunye neentsapho. Kulula ukuhamba kulo lonke elaseYurophu kwaye zonke iifayile zamanzi ezintle kuluhlu lwethu zifikeleleka kakhulu ngololiwe okanye ngebhasi, for uhambo-losuku okanye ukumisa inkampu, kubahambi abanamava okanye abaqalayo abaziva bexakekile kwaye baphupha ngokufumana eyona nto ibalaseleyo yendalo yaseYurophu.
Amsterdam ukuya kwitikiti laseParis
Amatikiti eLondon ukuya eParis
Rotterdam ukuya kwitikiti laseParis
Iibhasi ukuya kwitikiti laseParis
Apha Gcina A Isitimela, siya kukuvuyela ukukunceda ufumane amatikiti asezantsi kakhulu kaloliwe kunye neendlela zokuhamba uye nakweziphi iindawo ezintle ezinamanzi akuluhlu lwethu.
Ufuna ukuba zilungise ngendlela yethu hetalia us “7 Ezona ndawo zintle Zamanzi eYurophu” kwi sayithi yakho? Ungakhankanya noba ukuthatha iifoto zethu kunye itekisi asinike ngetyala nge link kule post blog. Okanye nqakraza apha: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-waterfalls-europe/?lang=xh ‎- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha elakhiwe umzila kaloliwe.
Kule linki ilandelayo, uya kufumana iindlela zethu kakhulu ethandwa uloliwe – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- lo kuxhumana ukuba IsiNgesi iindlela emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, kwaye ungayitshintsha i-tr kwi-pl okanye kwi-nl kunye nezinye iilwimi ozikhethileyo.
europetravel train Travel erentsali travelgermany Travelingtips indawo yokuhamba Iingxangxasi Iingxangxasi zaseYurophu
Ubuhle Of The Bernina Express
Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSwitzerland